Kedu ihe dị iche na Zipp NSW na Firecrest? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Zipp 404 nsw - kedu ka anyị si edozi
Zipp 404 nsw - kedu ka anyị si edozi
Kedu ihe dị iche na Zipp NSW na Firecrest?
Ihe si na ya pụta bụ igwe na-agbanye ọkụ, na-adị ngwa ngwa, na-akwụsi ike karị, ma na-adịkwa oke ọnụ karịaZipp siOgbe 303Firecrest. Ma dị ka ndịFirecrest, ọhụrụ 353NSWdị naanị maka ojiji na diski brek na tubeless taya.Eprel 20 2021
zip ka malitere ulo oru isiokwu ya nke n’abia maka 2020. Nke a bu ohuru 303 Fire Crest Diskreg Whizzerand, mgbe m kwuru ohuru, echere m na o bu ohuru ohuru, na nke a bu nnukwu mgbanwe maka akara aka ha nwere ike ikwu ma e jiri ya tụnyere ya. onye bu ha ụzọ na nke a ị na-echekwa n'etiti 10 na 50 watts na 40 KS kwa elekere, nke na-ada ụda pụrụ iche, mana ka anyị doo anya na ndị a abụghị nanị ihe ha na-ekwu banyere ikuku, ọ bụkwa banyere ike ọrụ ike na otu o si arụ ọrụ na wiilị niile. zip na-akpọ ya mkpokọta usoro arụmọrụ Video Anyị ga-akọwa nke ọma ihe nke ahụ pụtara na otu esi enweta nchekwa nchekwa ndị a. Amalitere m ebe a na GCM na 2013, na-ekwu maka nrụgide taya.
Imirikiti njem ndị njem na-arụ ọrụ ugbu a n'etiti 90 na 120 psi dị ka nrụgide a belatara n'ime afọ ole na ole gara aga, gịnị kpatara taya taya? ghọrọ ndị sara mbara nke mere na ha gara site na 23 ruo 25 ruo 28 na gafere gosipụtara nkasi obi anyị, mana ọ naghị adị mfe dịka nyocha na afọ ndị na-adịbeghị anya gosipụtara na ọ bụ n'ezie taya nrụgide dị ala nke na-ebunye obere vibration site n'okporo ụzọ ahụ igwe kwụ otu ebe na onye na-agba ịnyịnya, nke na-enye gị ohere ịgbagharị nke ọma karịa n'okporo ụzọ afọ ole na ole gara aga, anyị amaghị n'amaghị ama mere ule nke aka anyị na okwute PiruBay ma gosipụta ihe dị ọsọ ọsọ karịa igwe kwụ otu ebe na taya taya 28 iji mee ka gravel slash cyclocross dị larịị. igwe kwụ otu ebe na 35 millimita taya ma ọ bụ a igwe kwụ otu ebe igwe kwụ otu ebe na 54 millimita na-acha ọcha na taya na n'ezie ezi a bit nke leeway ọ bụ ezie na o nwere aerodynamics nke a ụgbọ ala - ọ bụ ugwu igwe kwụ otu ebe na cyclocross -Bike sekọnd ise n'azụ na ọzọ sekọnd ise laghachi n'okporo ụzọ . Ugbu a igwe kwụ otu ebe nwere oke nwayọ, kedu ihe ihu ya dị elu yana nnukwu aka ya gara ngwa ngwa, gịnị kpatara ọfụma mana ike ọgwụgwụ dị nro nke na-ekewapụ anyị pụọ na mkpọtụ na-enye anyị ohere ịfegharị ọsọ ọsọ, yabụ kedu nke ahụ metụtara ya? h akwa zip zip-ha nke ọma zips na-ekwu na ha reengineers ewepụtala echiche ha ma tinye oge na ume dị ukwuu n'ime nyocha arụmọrụ site na iji mkpịsị aero nke na-anọ n'ihu igwe kwụsi II na ihu igwe ha nwere ike ịlele n'ụzọ ziri ezi. Site na nke a, ị nwere ike ịkọwapụta etu oke arụmọrụ gị niile ga-esi nwee nguzogide na-agbanwe. Ha mezigharịrị Rolling Road iji mee ka ọ bụrụ ụzọ ụgbọ ala kachasị mfe n'ụwa, mana nke ị nwere ike iche bụ ezigbo ịme anwansị nke Belgium ga-adị ka Rolling Road Spring Classics Edition, n'ikpeazụ ha gosipụtara nsonaazụ ule gara aga yana nsonaazụ bụ ezigbo data siri ike nke, na nkenke, na-egosi na nrụgide kachasị mma gị bụ nguzozi n'etiti arụmọrụ na-arụ ọrụ na arụmọrụ na-arụ ọrụ, yabụ ike taya siri ike na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ọ na-ebelata ntakịrị na ngbanwe ahụ n'ụzọ ụfọdụ na-efu ike mana ọ na-ebunyekwa vibration karịa maka igwe kwụ otu ebe na maka gị, onye na-agba ịnyịnya ahụ, na ịma jijiji ahụ na-efukwa ike ma n'ezie karịa ọtụtụ ndị achọpụtala ugbu a, ọ bụrụ na ị na-akpa nkata data a na eserese, ị ga-enweta usoro mgbịrịgba.
See na-ahụ, ọ bụrụ na ị nwere taya abụọ dị nro, mgbe ahụ ị ga-ewepụ ọtụtụ watts n'ihi na ọ siri ike ma ị ga-ewepụ ọtụtụ watts n'ihi na ọ dị umengwụ n'ezie, mana maka ebumnuche dị iche iche ọnọdụ ziri ezi nke kachasị mma a Isi ugbu a dabere n'ezie ọdịdị nke usoro ahụ dabere na ịdị arọ nke onye na-agba ya yana elu nke ị na-anya n'ụdị siri ike karị, ọkachasị n'okporo ụzọ ndị dị egwu na ụzọ, nke ka ukwuu ego ị nwere ike ịme, yana nke a karọt na-abịa enwere ike ịchekwa 50 watts. Ya mere, na ihe niile na data zipu ị mepụtara na wheel obi na-amanye gị ka ị na-agba ọsọ nke wider, ọzọ ịrụ ọrụ nke ọma na taya na ị chọrọ ebe a na-agba ọsọ tubeless taya, na ha na-abụghị nanị kachasị maka aerodynamics, ma e mere na-na ị nwere na-agba ọsọ nke obere nsogbu, nke mbụ nwere ike bụrụ ihe kacha mkpa bụ na ha mụbara obosara nke akwa rim na 25 millimita, yabụ okpueze ọkụ ochie bụ 21, 303 nke pụtara izu ole na ole gara aga bụ 23, nke a bụ nke kachasị nza ya na 25, gini kpatara o buru ibu? The 303 si corrugated zippers na-ekwu na ha ghọtara na ụfọdụ ndị ahịa nwere ike ka na-achọ ịnya 25mm taya - ọ bụ n'ezie ọdịdị nke taya ma ọ bụ na rim bụ kpamkpam dị iche iche si nkịtị dị ka anyị nụrụ na mbụ. N'ezie, ọ dabere na ibu ahụ gị yana elu nke ụzọ ma ọ bụ ụzọ ị na-akwọ ụgbọala ị na-eji zip zipu data gị niile wee banye n'ime ya na mgbako na-arụ ọrụ n'ịntanetị ka ọ bụghị naanị isi ihe ndị anyị kwurula banyere ya ka a na-atụle ma ihe ndị ọzọ nakwa dị ka taya obosara rim obosara ọbụna taya oge m na nke a na ntọlite ​​otú 28 mil obosara na taya, ọ na-egosi na m na-akwọ ụgbọala na iri ise na ise mgbe otu psi na ihu na iri isii na abụọ mgbe itoolu psi na azụ taya, ya mere ihe dị ka ano na anọ ebe atọ ebe m na-enweta Pound iri ka ọ dị arọ, ọ ga-apụta ihe anọ psi karịa n'ihu na azụ, yabụ ọ ga-abụ? banyere 83kilos 59 ọzọ ah iri isii mgbe ise siri ike nweta ebe a ugbu a n'ebe a ọtụtụ n'ime unu nwere ike na-eche na ụfọdụ wheel ụdị a na-agba ọsọ 25 mil rim akwa maka a mgbe na ị na-ezi, ma ihe na-akpali bụ na zippers N'ikwu na nke a bụ ihe karịrị naanị ike nrụgide, n'ihi na ha na-ewu ihe n'ezie, ha na-ekwu na ha dị ugbu a na-emegharị ma na-ama jijiji-na-abanye n'ime rim ka ha nwee agba ha na ajị anụ wheelsda dịtụ ntakịrị n'ihi na wiil ndị siri ike dị ka ogologo wiil A na-ewere m dịka m nwere ike icheta mana m ga-agba ụta na ndị na-agba ugwu na-anọ na nrube isi ruo nwa oge ma lekwasị anya na ya mgbe ha mere obere ụkwụ ụkwụ 3-0 ha nke ọma na enweghị m ugwu igwe ugwu nwere ike ịkwụ ụgwọ ugbu a Nke a na ihe pụtara n'ezie nnabata, ọ bụ ezie na ọ pụtara a itule igwe kwụ otu ebe bụ En ike site na igwe kwụ otu ebe kama ịgafe niile nke vibration na ujo kwụsịrị rim na site spokes, ma ụfọdụ n'ime ya nwere ike na-erite n'ebe ọzọ na ị na-eleghị anya fa miliar na.
Frame Design Ihe mara mma nke eriri carbon pụtara na ị ka nwere ike injinia na mpụta nke akụkụ ka wiil ahụ wee ghara ịdị na-agbanwe agbanwe mgbe akpatịbere ya. Kedu ka ị si ahapụta mgbanaka a na-agbanwe agbanwe? Zippers? Nhazi dị iche? Dị iche iche resin na ihu ọma ihe niile? dị iche na ọhụrụ a rim bụghị naanị a ọhụrụ rim Flange ọhụrụ ehiwe - ugbu a naanị obere peeji ebe a, n'ezie. Dị nnọọ ka ihe dị mkpa maka redesign bụ eziokwu ahụ bụ na wiil ndị a ekerịtala ọtụtụ ibu ma e jiri ya tụnyere ndị bu ha ụzọ.
Ugbu a, ha dị naanị otu puku gram atọ na iri ise na ise maka grambụ dị ezigbo mfe na nhazigharị emewokwa ka o kwe omume mezie usoro mmepụta ma melite arụmọrụ ya na nke ahụ gosipụtara na ọnụahịa ahụ, yabụ ndị a bụ dị ọnụ ala karịa ndị bu ha ụzọ, mgbe ahụ, m na-akwụ naanị 1800 euro maka ụzọ ha nwekwara ndụ nnọchi amụma na anyị na-ekwu banyere 303s nke ahụ pụtara na ị ga-enweta ụzọ ọhụụ ma ọ bụrụ na ihe ga - eme gị mgbe ị nọ gaba ka arapara n’isi ikpeazu, maka na ihe na eme wiilị gị mgbe ị na - apụ. Echere m na ọtụtụ n'ime anyị na-anya ụgbọala ma ọ bụ nwee nrụgide dị elu na taya anyị maka ụjọ ịbanye n'ime ihe dịka olulu na ihe ndị ọzọ n'okporo ụzọ? na-enwe mmetụta mmebi ma ọ bụ ka njọ, ọ bụrụ na ị kụrụ ya ike zuru ezu, ị nwere ike ọkọ gị rim na stof? Mgbe ahụ ọ ga - eme ma ọ bụrụ na ị kụrụ ite dị ka nke a, ọ bụghị nke na - eri nri, mana ọ ka dị mma mgbe ị nwetara 59 isi 1 psi na taya gị, n'ezie anaghị m enweta ebe a n'ihi na enweghị m tubes na tubeless ma ole nkwado a 28 millet a Widerrimwell enye m ga-ka nwere ike ikwu ma na-ezere ya ma ọ bụ hopping a ewi ma m kụrụ rim nke m chere na m kwesịrị mere ugbu a. Isi okwu ikpeazu nke m chere na m ga-ekwu? Mgbe 303 kụrụ ahịa n'izu ole na ole gara aga, a na-ekwu na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma karịa ụgbọ ala ọkụ 303 ochie, yabụ kedu ka abụọ ndị a si debe 303s na ọhụụ ọhụrụ 303 nke pụtara na nke a bụ 5 watts karịa nke ọma na 40km / h , yabụ iguess dị ma ọ bụ nke ukwu ma ọ bụ ntakịrị dabere na ụdị ọkwọ ụgbọ ala ị bụ, ihe dị iche bụ n'ezie na obosara ụlọ ahụ dị iche, mana profaịlụ rim dịkwa iche, ndị a dị mma karịa mgbe ọ bụla, ndị a bụ 40 mm dị omimi ma ọ bụrụ na 45mm dị omimi maka 303s, yabụ nke ọhụrụ gị bụ 303 dị anya site na zip, kamakwa ọtụtụ data na-agbanye mmanụ ọkụ nke ihe kpatara taya nwere ike ịdị ngwa ngwa, gịnị kpatara ha nwere ike iji rụọ ọrụ karịa anyị niile onye ọ bụla kwesịrị ga-agba ọsọ 28 ma ọ bụrụ na anyị bi na ụwa n'ezie ma ghara ịkwọ ụgbọ ala na-enweghị ntụpọ.
Mee ka anyị mara na ihe ị chere banyere taya ị na-eji ugbu a, ị ga-anwa ọnwụnwa ịdaba na nrụgide dị ala? ya mere sonye na okwu ma biko nye edemede a nnukwu isi aka ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị
Kedu otu omimi Zipp 404s si?
Gịnị bụ wiil Zipp?
Ngwaahịa mbụ nke ụlọ nyocha aZipp808 NSW wheelset - weere mmeri n'afọ gara aga na UCI ụmụ nwanyị oge ikpe na World Ironman. Ọ bụ ezie na 808 bụ TT pụrụ iche, 404 NSW, ya na 58mmmiri emirim, bu ihe kariri ihe ozo.Ọnwa Ise 17, 2016
Ngwongwo Zipp nwere oke ibu?
Zippbụ ihe American ụlọ ọrụ na a kasị mara amara maka emebe, n'ichepụta, na ahịa carbon-mejupụtara igwewiilmaka ịgba ịnyịnya n'okporo ụzọ, triathlons, ịgba ọsọ egwu, na ịgba ịnyịnya ugwu. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na-agụnye aka, stems, oche oche, taya, akpa dị n'ime, teepu njikwa, na akpa.
Ndi wheel Zipp ruru ego ahụ?
NaZipp 404bụ, na-enweghị ajụjụ, a kpochapụwo aerodynamic wheelset na otu nke n'elu nhọrọ mgbe ị na-achọ aerodynamic uru. Ọbụlagodi nayaadaba na ọnụahịa dị oké ọnụ ahịa, ogo ya na njirimara yakwesịrị yama ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe siri ike, a pụrụ ịtụkwasị obi aerodynamic nweta nkwalite.19bọchị 19 2020
Kedu ihe NSW pụtara maka Zipp?
NSWna-anọchite maka Ngwá Ọsọ Ngwa Ngwa. 'Akwu' bu aha otutu nke enyere injinia omimi n'ime imeZipp siụlọ ọrụ mmepụta ihe naNSW bụihe ha na-enweta uru ọ bụla.Febbọchị 1 2016
Ndi Zipp 404 ruru ego ahụ?
Ọbụlagodi nayanwere ike iyi ọnụ ahịa ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego,Zipp 404Wheelset egosila na ọ bara nnukwu uru karịa oge. Ngwakọta na-enweghị ntụpọ nke nrụgide, ike, na arụmọrụ ikuku na-eme ka wiil ndị a dị mma iji ọtụtụ ọnọdụ ihu igwe na ụzọ.19bọchị 19 2020
NaZipp404 bu ajuju aerodynamic n’enweghi ajujuwiilịna otu n’ime nhọrọ kachasị elu mgbe ị na-achọ uru ụgbọ elu. Ọbụlagodi na ọ daba na ọnụ ahịa ọnụ ahịa, ogo ya na njirimara yakwesịrị yama ọ bụrụ na ị na-eche banyere ihe siri ike, a pụrụ ịtụkwasị obi aerodynamic nweta nkwalite.19bọchị 19 2020
Kedu ihe kpatara wiwi Zipp ji dị mma?
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ nwere ike iyi ọnụahịa ma ọ bụrụ na ị nọ na mmefu ego,Zipp si404 Wheelset egosila na ọ dịukwubara uru na oge. Ngwakọta na-enweghị ntụpọ nke rigidity, ike, na arụmọrụ aerodynamic na-eme ka ndị awiilezigbo iji mee ihe n’ọtụtụ ihu igwe na ọnọdụ okporo ụzọ.19bọchị 19 2020
Kedu ọsọ ọsọ wiilị Zipp na-eme gị?
Site na ule ya, onye na-agba ya na-achọpụta: Ya na otuwiil, Ọ nwere ike ịnya 20 nkeji na nkezi ọsọ nke 41.12 kph na nkezi ike nke 379 watts. NaZipp808 NSW aerowiilọ na-agba ịnyịnya 51 na nkezi ọsọ nke 41.13 kph na ike nke 344 watts.June 6. 2016 Nọvemba
Kedu nnukwu profaịlụ nke Zipp 404 NSW?
N’atughi anya, ebe mgbada ugwu a bu ebe Boulder no, nke mere ya ebe di nma iji nwaa mmeghari nke mmeghari ugbo elu. Oke 28.5mm n'obosara nke 404 NSW profaịlụ n'ezie dara ihe dị ka ọkara ọkara ala nke rim.
Kedu ihe na - eme breeki diski a na - ekpochapu Zipp 404 dị mma?
Zipp 404 NSW Tubeless Disc-brake na-enye ụdị rim ọhụụ yana arụmọrụ na-arụ ọrụ nke ọma ma belata ikike dị n'akụkụ yana Cognition diski-breeki hubset maka ịbawanye ụba na obere ịdọrọ. A na-emepụta 404 NSW Tubeless Disc-breeki, nke nwere omimi dị omimi nke 58mm, maka ndị na-agba ịnyịnya na ụzọ atọ na-achọ ọsọ na nkwụsi ike ka ukwuu.
Ndi okpu carbon nke Zipp 404 bu oche oma?
Ọ bụ n'ime ụlọ a ka Zipp tụụrụ ime ọfụma 404 NSW ndị na-ahụ maka ikuku carbon, ọ bụkwa n'ezie otu ọkụ mmụọ nke ọdụ ụkwụ, yana ụlọ ọrụ ọhụụ, arụmọrụ arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na arụmọrụ braking dị ịtụnanya.